NK | विपत्तिमा बन प्राविधिक समाज दाङले चलायो सहयोग अभियान,हिजो मानव सेवा आश्रममा भोजन
दाङ । बन प्राविधिक पढ्ने युवाहरुको सस्था बन प्राविधिक समाज दाङले विपत्तिमा सघाउन मानव रक्षा सहयोगार्थ अभियान चलाएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै फ्रटलाइनमा बसेर काम गर्ने तथा अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई विभिन्न कुराको अभाव भएपछि युवाहरुले स्वस्फुर्त रुपमा मानव […]
रुपन्देही । बिद्यालयका प्रधानअध्यापकसहित ८ जना शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माबि बन्द गरिएको छ । नेपालमा दोश्रो लहरको कोरोना भाईरस संक्रमण प्रवेश गरेसँगै सिधै समुदायस्तरमा पुगेकोले बिद्यालय, शिक्षक र बिद्यार्थीहरु संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सो […]
चितवन । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले सरकारलाई विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ। प्याब्सनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन कक्षाबाट सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकिने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ। […]
फोटो नेपालयनकर्मी नीराजन डाँगी
काठमाडौं । सरकारले मंगलबारदेखि देशभरका शिक्षण संस्था चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले वायु प्रदुषण बढेकाले सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अब […]
काठमाडौं । शिक्षाले व्यक्तिमा चेतनाको जागृत गराउँछ र उसको सोचाइ तथा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ ! व्यक्तिमा ज्ञान, सीप र धारणाको विकास गराउँछ ! शिक्षाको माध्यमबाट नै देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरी विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ ! देशमा कस्तो […]
इटरिका सम्पुर्ण निजि कलेजहरु अनिश्चितकालिन बन्द
इटहरी । इटहरीका निजी कलेजका विद्यार्थीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगे पछि हिसान सुनसरीले इटहरीका सबै निजी कलेजहरु अनिश्चित समयको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थीहरु कलेज तोडफोड र सांङ्घातिक आक्रमणमा उत्रिएको भन्दै तत्काललाई निजी कलेजहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको […]
कक्षा ११ को परीक्षाफल प्रकाशित, ७८.६३ प्रतिशत उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । कक्षा ११ को आंशिक/ ग्रेड वृद्धि परीक्षार्थीहरुको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको बोर्डले जनाएको हो । बोर्डका अनुसार परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीमध्य ७८.६३ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण भएका छन् । […]
‘एसईई’ परीक्षा आगामी जेठ १३ गतेदेखि संचालन हुने
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ‘एसईई’ आगामी जेठ १३ गतेदेखि संचालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले २०७७ सालको एसईई जेठ १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । एसईई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिने छ […]
जनता माध्यमिक विद्यालय बर्दिबासलाई ३ करोड बजेट
विद्यालयमा ओटो मोवाईलको पढाई, बगैंचा निर्माण, नमूना विद्यालयको अधार निर्माण, शैक्षिक गुरुयोजना निर्माण गर्न नेकपाका युवा नेता तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य शंकर महतोको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको वडा अध्यक्ष भरत बहादुर हमालले बताए । बर्दिबास । तीन बर्ष अघि जनता […]